२०७७ चैत ३० सोमबार ०९:१६:००
हत्याको विरोधमा सुनचाँदी व्यवसायी आन्दोलित, पसल बन्द गरेर राजमार्गमा प्रदर्शन
सिराहाको लहान नगरपालिका– २३ का सुनचाँदी व्यवसायी प्रदीप मिझार विश्वकर्माको धारिलो हतियार र गोली प्रहार गरी हत्या भएको छ । शनिबार राति १ बजेतिर सुनचाँदी पसलमा लुटपाट गर्न आएको समूहले उनीमाथि आक्रमण गरेको थियो । विश्वकर्माको उपचारका क्रममा लहानस्थित सप्तऋषि अस्पतालमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको हो ।
४५ वर्षीय विश्वकर्माले लहान नगरपालिका– २२ बर्छवा घर भए पनि लहान– २३ गढिया चोकमा रहेको वडाध्यक्ष कन्हैयाप्रसाद गुप्ताको घरमा सुनचाँदी पसल सञ्चालन गर्दै आएका थिए । उनको परिवारसमेत सोही घरमा बस्दै आएको छ । लुटेराहरूले विश्वकर्माकी ३५ वर्षीया पत्नी अनिताकुमारी दुलालमाथि पनि आक्रमण गरेका थिए । सप्तऋषि अस्पतालमा उपचारपछि उनी घर फर्किएको मृतकका दाजु वीरेन्द्रले जानकारी दिए ।
२० वर्षअघि गाउँ छोडेर बुटवल, नेपालगन्ज, दाङ हुँदै लहानमा सुनचाँदी पसल सञ्चालन गरेका विश्वकर्मा पछिल्लो एक वर्षदेखि भने वडाध्यक्ष गुप्ताको घरमा पसल सञ्चालन गर्दै आएका थिए । इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका प्रमुख डिएसपी डा. तपनकुमार दाहालले लुटपाट गर्ने उद्देश्यले ६–७ जनाको समूह विश्वकर्माको घरमा प्रवेश गरेको र खुकुरी, रड प्रहार गरी अचेत बनाएपछि गोली प्रहार गरेको पाइएको जानकारी दिए । खुकुरी, रड प्रहारसँगै छातीमा गोली प्रहार गरेपछि अत्यधिक रक्तस्राव हुँदा विश्वकर्माको ज्यान गएको सप्तऋषि अस्पतालले जनाएको छ ।
सुनचाँदी पसल लुट्न शनिबार मध्यराति आएका लुटेराले सुतिरहेका व्यवसायी प्रदीप मिझार विश्वकर्मालाई धारिलो हतियारले आक्रमण गरेपछि गोली हानेर हत्या गरेको लहान प्रहरीले जनाएको छ
प्रहरीले घटनास्थलबाट फलामको छिनोसहित लहान– ७ का करिब २६ वर्षीय रामकृष्ण चौधरीलाई पक्राउ गरेको छ । उनले दिएको सूचनाका आधारमा लहान– २३ घर भएका २९ वर्षीय सूूर्य सहनीलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको डिएसपी डा. दाहालले जानकारी दिए ।
व्यवसाय र व्यवसायी सुरक्षाको माग
हत्याको विरोधमा आइतबार व्यवसायीहरूले लहानमा प्रदर्शन गरेका छन् । व्यवसायी सुरक्षाको माग गर्दै करिब तीन सय व्यवसायीले प्रदर्शन गरेका हुन् । सुनचाँदी व्यवसायी संघ सिराहा जिल्ला समितिका अध्यक्ष विकास शारडाले व्यावसायिक सुरक्षाको माग गर्दै जिल्लाभरका व्यवसायी प्रदर्शनमा सहभागी भएको बताए । ‘आ–आफ्ना पसल बन्द गरेर करिब तीन सय सुनचाँदी व्यवसायी प्रदर्शनमा सहभागी भए,’ अध्यक्ष शारडाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘व्यवसाय र व्यवसायी सुरक्षाका साथै हत्यामा संलग्नलाई कारबाही, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिलगायत माग पनि हामीले उठाएका छौँ ।’
महासंघको जिल्ला समिति, लहान नगर समिति र विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायी सञ्जालले हत्याको भत्र्सना गर्दै अपराधीलाई तत्काल पक्राउ गर्न माग गरेको छ । तीनवटै संस्थाले आइतबार विज्ञप्ति निकाली पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र व्यावसायिक सुरक्षाको माग गरेको महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भरत अग्रवालले बताए । आफ्ना माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने उपाध्यक्ष अग्रवालले चेतावनी दिए ।
६ सदस्यीय वार्ता समिति गठन
पीडित परिवारले विश्वकर्माको शव बुझ्न मानेको छैन । स्थानीय प्रशासनले शव उठाउन आग्रह गरे पनि पीडित परिवारले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म शव नबुझ्ने अडान राखेको छ । उनको शव लहनस्थित रामकुमार–उमाप्रसाद स्मारक अस्पतालमा राखिएको छ ।
पीडितका माग सम्बोधन गर्न पीडित परिवार र व्यवसायीहरूको सहमतिमा ६ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको महासंघले जनाएको छ । महासंघका जिल्ला अध्यक्ष शारडाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा नगर अध्यक्ष श्यामप्रसाद साह भोरेभोर, हरि विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा, जितेन्द्र रसाइली, सञ्जीव विश्वकर्मा र ललितनारायण विश्वकर्मा
सदस्य छन् ।
शृंखलाबद्ध आक्रमणले व्यवसायी आतंकित
एकपछि अर्को गरी व्यवसायीमाथि भइरहेका आक्रमणबाट व्यवसायी आतंकित भएका छन् । महासंघका उपाध्यक्ष अग्रवालका अनुसार सात वर्षअघि सिराहा चोहर्वा सडकखण्डमा पर्ने विष्णुपुरमा सुनचाँदी व्यवसायी सुरेश साहको हत्या भएको थियो ।
९ चैत ०७५ मा लहान– ७ स्थित विकास ट्रेडर्स सुनचाँदी पसलमा अज्ञात समूहले विस्फोट गराउँदा आधा दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका थिए । त्यसअघि अर्नमा गाउँपालिकाको लौवापोखर, धनगढीमाई नगरपालिकाको कसाहा र तेनुवापट्टीमा सुनचाँदी पसलमा डकैती भएको थियो ।
केही वर्षयता लगातार भइरहेका यस्ता घटनाले व्यवसाय र व्यवसायीको सुरक्षामा गम्भीर चुनौती देखापरेको उपाध्यक्ष अग्रवालले बताए । ‘लगातार भएका आक्रमणका घटनाबाट व्यवसायी हतोत्साही हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । त्यसैले हामी यसपटक प्रशासनबाट व्यवसाय र व्यवसायीको सुरक्षाको दरिलो प्रत्याभूति खोजिरहेका छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
आत्महत्या रोकथाम कसरी गर्ने ?